Muudamuu Doktar Abiyyi Ahmad ilaalchisuun ibsa gammachuu Waldaa Diyaaspooraa Oromiyaarraa kenname
Seenaa biyya keenyaa keessatti kan jalqabaa kan ta’e sirni aangoo karaa nagaatiin walharkaa fuudhuu taasifameera.
Sirna kanaanis ummanni biyya keenyaa hundiifi qaamoleen diyaaspooraa biyya keessaafi biyyoota adda addaa jirru gammachuun onneerraa burqe nutti dhagayameera.
Adeemsi aangoo karaa nagaatiin walii dabarsuu kunis lammiilee keenya keessatti abdii uumeera. Adeemsi kun biyyoota Afrikaatifillee akka muuxannoo guddaatti fudhatamee hojiirra ooluu kan qabudha.
Carraa kanaan muummicha ministiraa FDRI duraanii kabajamoo Obbo Hayilamaariyaam Dassalany yeroo bulchiinsasaanii keessatti Guddina Dinagdee gama hundaan akka biyya keenyatti galmeessisaniifi sirni walharkaa fuudhinsa aangoos karaa nagaatiin akka raawwatamuuf gahee olaanaa taphataniif kabaja isaaniif qabnu ibsaa muummicha ministiraa haaraa, kabajamoo Dr. Abiyyi Ahmadiifis bara hojii gaarii akka ta’uuf hawwuun hawaasni biyya keenyaa hundi nageenyaafi misooma biyyasaaniif isaanii akka bahan ni gaafanna.
Kabajamoon ministiraa muummee Dr. Abiyyi Ahmad haasawa sirna aangoo walharkaa fuudhinsaa irratti taasisan keessatti keessumaa hawaasa Diyaaspooraaf ergaa dabarsaniin diyaaspooraan Itiyoophiyaa iddoo deeme hundatti baadhatee kan deemu eenyummaafi kabaja Itoophiyyummaa isaa gara hojiitti hiikuun gara biyyasaatti deebi’ee biyyasaa misoomsuun cinaatti hojii hojjechaa jiru kamiyyuu keessatti qaawwa jiru guutuuf yeroo kamiyyuu caalaa cimnee hojjechuu qabna.
Diyaaspooraan qabeenyaafi beekumsasaa qindeessee biyyi keenya sadarkaa olaanaatti akka ceetuuf gaheen qabu guddaa ta’uu ibsuun ergaan isaan dabarsan humna kan nuuf ta’e ta’uufi kanas guutummaatti fudhannee hojiirra oolmaa isaatiif gara kuteenyaan kan sochoonu ta’uu ibsina.
Dhumarrattis baroota Karooraa Guddinaafi Tiraansfoormeeshinii hafan addunyaanis ta’e hawaasni keenya waan nurraa eeganii ol bu’aa quufsaa ta’e galmeessisuun fayyadamummaa ummata keenyaa mirkaneessuuf yeroo kamiyyuu caalaa yeroo itti qophoofne ta’uu ibsina.
Beektonni, dargaggoonni, dubartoonni, abbootiin amantii, qonnaan bultoonniifi horsiisee bultoonni walumaagalatti ummanni biyyatti tokkummaa, jaalalaafi walkabaja lammiileetiin biyyi keenya sadarkaa olaanatti akka ceetuuf gahee keenya kan baanu ta’ee irra deebinee waadaa galla.
Haaromsa biyya keenyaa dhugoomsuuf bara dheeraaf kan ture aadaa walkabajaafi waliin jireenyaa keenya cimsuun harka walqabannee nageenya, misoomaafi ijaarsa sirna dimokraasii biyya keenyaa mirkaneessuuf haa tumsinu.
Waldaa Diyaaspooraa Oromiyaa
Torban kana/This_Week 4324
Guyyaa mara/All_Days 1641919